Ogaden News Agency (ONA) – Axmaaro & Oromo Maxay Diri-Dhabo La Maagan Yihiin?
Axmaaro & Oromo Maxay Diri-Dhabo La Maagan Yihiin?
Posted by ONA Admin	/ October 10, 2018
Magaalada Diri-Dhabo waa xudunta iyo caasimada rasmiga ah ee dhulka Soomaaliyeed, waa caasimada dhabta ah ee Soomaalida Ogadenya (Soomaali Galbeed). Gumaysiga Itoobiya ayaa ka hor istaagay oo dadaal dheer ugu jira in shacabka Soomaaliyeed laga fara-maroojiyo lahaanshaha magaalada Diri-Dhabo.
Hadaba bahda Wakaalada wararka Ogadenya ee (ONA) ayay u suura gashay inay hesho qorshe halis ah oo Axmaaro & Oromo ay la damacsan yihiin inay Soomaalida kala wareegaan magaalada Diri-Dhabo. Xogtu waxay sheegaysaa in Isbahaysiga Axmarada iyo Oromada ay wadaan qorshe meesha lagaga saarayo hanaanka wax loo qaybsado ee ku aadan magaalada kaasoo ahaa 40-40-20 Qorshahan haduu meesha ka baxana waxay dhabar jab wayn ku noqon doontaa shacabka Somaaliyeed.
Waxaa kale oo xogtani ay intaas ku daraysaa in olole qarsoon oo ay hor kacayaan xubnihii xukuumadii hore ay Addis-Ababa sidii awood qaybiga maamulka magaalada wax looga badali lahaa taas oo looga golleeyahay in Soomaalida laga dhigo in looga badan yahay oo aysan xaq u lahayn lahaanshaha magaalada , taasi haday Axmaaro iyo Oromo ku guulaysato waa khasaare taariikhi ah oo aysan Soomaali kasoo waaqsan karin.